स्वास्थ्य तथा यौन जानकारी Archives - Page3of5- Myagdi Online
दृष्टिबिहीन विद्यार्थीको स्वास्थ्य परिक्षण
11 महिना, 16 दिन अगाडि
म्याग्दी, २२ फागुन । जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका –३ मौवाफाँटमा रहेको ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहिन विद्यार्थीको आँखा र स्वास्थ्य परिक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा अन्य विद्यार्थीहरुको समेत स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुका साथै निशुल्क औषधी वितरण गरिएको छ । वडा अध्यक्ष जीवन मल्लको संयोजनमा डस्ट्री याक फाउण्डेशन काठमाडौँले विशेषज्ञ... पुरा पढ्नुहोस
निशूल्क आँखा शिवीरबाट करिब छ सय जना सेवा लिए
म्याग्दी १ माघ । बेनीमा सम्पन्न निशूल्क आँखा शिवीरबाट करिब छ सय जना लाभान्वित भएका छन् । बेनीमा रहेका लायन्स कल्वहरुको संयुक्त आयोजनामा शनिबार र आईतबार बेनी अस्पताल परिसरको आँखा उपचार केन्द्रमा सञ्चालन भएको शिवीर सोमबार बिहान समापन भएको छ । शिवीरमा ५९२ जनाले सेवा लिएको आयोजकले जनाएका... पुरा पढ्नुहोस
कुलतमै सक्छन् नेपालीले २२ अर्ब
लागूपदार्थका दुव्र्यसनीले बर्सेनि २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कुलतमा फसाउने गरेका छन् । गाँजा÷चरेस, हेरोइन तथा फर्मास्युटिकल ड्रग्सका दुव्र्यसनीले दैनिक खर्च गर्ने रकमको अनुपात वार्षिक २२ अर्बभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । दुव्र्यसनीले वार्षिक लागूपदार्थ सेवनवापत खर्च गर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक... पुरा पढ्नुहोस
जाडो मौसममा अनुहारको सुन्दर बनाउने तरिका
जाडो मौसम सुरु भएको कारणले अनुहार तथा छालाको सुन्दरतामा ह्रास आउने गर्छ । त्यसमा पनि झन् सुख्खा छाला हुनेको लागि यो मौसम शत्रु मानिन्छ । तर नआत्तिनुहोस्, हामीस‘ग केही उपयोगी टिप्सहरु छन्, जसले तपाईको अनुहारमा सुन्दरता निखार्न मद्धत गर्नेछ । जाडोयाममा छालाको रोमछिद्र बन्द हुने भएको हुँदा छालामा मनतातो पानीको... पुरा पढ्नुहोस
ओछ्यानबाटै जिबन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल
म्याग्दी,१७ पुस । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ स्थायी घर भएका टिका बहादुर खत्रीले ओछ्यानबाटै जीवन रक्षाको लागि सहयोगको अपिल गरेका छन । सामान्य परिवारका खत्री बिगत दुई महिना देखि हाडजोर्नीको कारण बाट ग्रसित भएका खत्री अस्पतालको समान्य उपचारपछि आर्थिक अभावका कारण ओछ्यानमै थला परेका छन् । जन्मदेखी नै दायाँ खुट्टा छोटो... पुरा पढ्नुहोस
म्याग्दीमा स्वास्थ्य बिमामा सत्र सय परिवार आवद्ध
म्याग्दी १६ पुष । आर्थिक रुपमा विपन्न र गरिब समुदायका नागरीकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालीत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा म्याग्दीका करिब सत्र सय परिवार आवद्ध भएका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले वि.स २०७३ पुष १३ गतेदेखि म्याग्दीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । एक... पुरा पढ्नुहोस
लागु औषध सहित एक युवक प्रक्राउ
म्याग्दी, १४ पुष । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले लागु औषध सहित एक युवालाई विहिबार प्रक्राउ गरेको छ । म्याग्दीको बेनीनगरपालिका ७ संगमचोकमा लागृु औषधी सहित पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका २२ बर्षिय युवक बेनीनगरपालिका ८ पिपलचोक बस्दै आएको बताएपनि पहिचान खुलाएको छैन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नुर्फिन सिसि पिस... पुरा पढ्नुहोस
राखु भगवतीको आखाँ शिविरमा तिनसय २० जना लाभान्वित
२ पुष २०७४, आईतवार
म्याग्दी, २ पुष । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका– २ राखु भगवतीमा शनिबार सम्पन्न आखाँ शिविरमा तिनसय २० जनाले सेवा लिएका छन् । लायन्स क्लव अफ म्याग्दी दोभानको आयोजना, रघुगंगा गाउँपालिकाको सह– आयोजना, आखाँ उपचार केन्द्र, म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा आखाँ परिक्षण शिविर राखिएको थियो । वडा कार्यालयमा आयोजना भएको आखाँ शिविरमा रघुगंगा... पुरा पढ्नुहोस
हृदयाघात के हो ? किन हुन्छ यूवा अबस्थामै हृदयाघात ?
करिब सात महिनाअघि अस्पतालको इमर्जेन्सीमा २० वर्षका एक युवालाई ल्याइयो । हृदयाघात भएरै ल्याइएका उनको केन्द्रका सिनियर कन्सलटेन्ट कार्डियोलोजिष्ट डा. यादवदेव भट्टले सफल शल्यक्रिया गरे । ‘डाक्टरी पेशाका क्रममा मैले हजारौँ हृदयाघातका बिरामीको उपचार गरें,’ डा. भट्टले भने, ‘तर त्यो सबैभन्दा कम उमेरको हृदयाघातको शल्यक्रिया थियो ।’ उनका अनुसार यी... पुरा पढ्नुहोस
गलेश्वरमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन उद्घाटन
म्याग्दी, २३ कात्तिक । बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन उद्घाटन गरिएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ ‐मोना) जापान, न्यू धौलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको लगानीमा निर्मित भवनको बिहिबार एक कार्यक्रमका विच मोना अन्र्तराष्ट्रियका अध्यक्ष चक्र बहादुर थापा, धौलागिरि सहकारीका... पुरा पढ्नुहोस